Universal Music haizosvika chibvumirano chega nechero chikuva chekutepfenyura | Ndinobva mac
Hondo yekurwira kodzero dzega kwega zvemumhanzi zviri kupisa, kunyanya pakati peApple Music neTidal services. Universal Music Group, zvisinei zvinoita senge haibvumirani nekusunungurwa kwakasarudzika kwemaarubhamu matsva akagadzirwa nekambani. Sezvakataurwa nemusoro wekambani yeUniversal Music, Lucian Grainge, kune vese maneja, kubva panguva ino zvichienda mberi, hakuchazovazve nerumwe rudzi rwezvibvumirano zvekusarudzika nechero mimhanzi yekutenderera, zvichireva kuvhurwa kwakasarudzika kuAlb Ocean Ocean album Apple Music mazuva mashoma apfuura.
Frank akaburitsa dambarefu rake "Channel Orange" uye rake rinoonekwa albha "Endless" pasi pe Def Jam Records, imwe yemakambani mazhinji ekurekodha ari pasi pemuraira weUniversal Music. Zvinoenderana neruzivo urwu album "Endless" yakazadzisa chibvumirano chaFrank naDef Jam saka kuburitswa kwenyaya yedambarefu rake "Blond" chete neApple Music ndiko kusununguka kwakazvimirira.
Kunyangwe Universal Music yaigona kuisa munzvimbo dzese michina yepamutemo kuti ishandise chibvumirano chega chega, hazvigone kuti ichazviita sezvo yaive yatozadzisa chibvumirano chayo chema disc maviri ne Def Def. Nekuzvimiririra kupa yazvino dambarefu "Blond" Frank anogashira 70% yemari yese, chimiro chiri kure kure ne17% chawaizogamuchira dai chakange chaburitswa kuburikidza neiyo Def Jam chitambi. Yese neDef Jam vakaona mashandiro anoita dambarefu rekuona "risingagumi", iro raive risina kuitirwa, rakazadzisa chibvumirano chakasainwa naFrank.
Kunyangwe pasina chakasimbiswa, hazviite kuti kuburitswa kwe "Blond" kwakazvimiririra uye zveApple Music chinodzivisa hukama hweMusic Universal nemimhanzi yekutenderera masevhisi. Pfungwa yekusvika pazvibvumirano zvakasarudzika nemhando iyi yemimhanzi masevhisi yakagara ichitsoropodzwa munguva yakapfuura, asi kunyangwe zvakadaro, makambani ekurekodha akaenderera mberi nekuwana zvibvumirano navo.
Apple Music yakachengetedza huwandu hwakawanda hweakasarudzika mumakore apfuura kusanganisira Drake, Kate Perry, Taylor Swift ... Britney Spears anotarisirwa kuburitsa dambarefu rake idzva Glory munguva pfupi iri kutevera kuburikidza neApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi. Zvinenge zvichinakidza kuona kana mamwe ese makuru mazita anotevera mutsoka dzeUniversal Music kure nemhando idzi dzega. Aya marudzi ezve kupa ndizvo zvinokurudzira izvo zvese Apple Music uye Spotify kupa kuti vawane simba pamusoro peumwe neumwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Universal Music haizosvika pachibvumirano chega chega nechero chikuva chekutepfenyura
Alicia Keys, Elton John, Britney Spears pakati pevamwe vacharidza paApple Music London Festival
Maitiro ekuvhura hwindo nyowani muMeyili neyakareruka keyboard keyboard